निको हुँदै को’रोना संक्रमित, एकैदिन दुई जनाको डिस्चार्ज ! – Khabarhouse
निको हुँदै को’रोना संक्रमित, एकैदिन दुई जनाको डिस्चार्ज !
Khabar house | १० बैशाख २०७७, बुधबार ११:३७ | Comments
काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपालमा को;रोना भाइरस (को’भिड १९) का संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि निको भएर घर फर्कनेको संख्या पनि बढेको छ। बुधबार उदयपुरमा तीन जनामा सं’क्रमण पोजेटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या ४५ पुगेको छ भने सात जना निको भएर घर फर्किसकेको छन्।
आज थप दुईजना को;राना स्रक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै को;रानालाई जित्ने नेपालीको सङ्ख्या ७ पुगेको हो। यस अघि पाँच जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन् । बुधबार टेकु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका धादिङका ३४ वर्षीय युवक र सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कञ्चनपुरका ४० वर्षीय पुरुष निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । उपचारका क्रममा पछिल्ला रिपोर्टहरु नेगेटिभ आएपछि उनी बुधबार डिस्चार्ज भएका हुन् ।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-९ सुन्दरपुरका ईन्द्र बहादुर बिक भारतबाट आएका हुन् । उनको तेश्रो र चौथो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालले बुधबार डिस्चार्ज गरेकाे हाे । चैत २१ गते उनको थ्रोट स्वावको नमूना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आए पछि २२ गते उनलाई सुन्दरपुरबाट उपचारका लागि धनगढी ल्याइएको थियो । उनीसँगै कैलालीका अन्य दुई जनामा पनि को;रोना पुष्टि भएको थियो । ती मध्ये एकजना युवा यसअघि नै निको भइसकेका छन् भने सुदूरपश्चमको पहिलो संक्रमित युवा पनि डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।